Ukubuyela umva kukaDean
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguOlivia
Indawo entsha yokuphumla esanda kulungiswa ehlala umganyana nje ukusuka kuMlambo iGreenbrier, uhamba ngaphantsi komzuzu ukuya emlanjeni! I-Dean's Retreat yamkela kamnandi iindwendwe ezisi-8! Ikhitshi eliphangaleleyo lilungile ekusingatheni izidlo kunye nosapho lwakho. Isitovu sepellet sihle naso!
Ukonwabele ukutyibilika ekhephini/ekhephini? Siyimizuzu engama-30 kuphela ukusuka eSnowshoe Mountain Resort!
Ndijonge phambili ekwabelaneni ngekhaya lam nawe kwaye ndiyathemba ukuba uyonwabele njengoko ndenzayo!
Kukho indawo engasemva ephangaleleyo apho abantwana banokudlala okanye bazulazule izilwanyana zasekhaya. Iyadi ibiyelwe ngokupheleleyo ngocingo lwabucala! Kukwakho nedekhi yangasemva enegrille, apho wena nosapho lwakho kunye nabahlobo bakho ninokonwabela ubusuku obuzolileyo.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye zonke iilinen / iitawuli/izinto zangasese ziya kubonelelwa!
I-WIFI kunye neTV (iNetflix) zinikezelwe!
Ukonwabele ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela iphenyane, ukukhwela inqanawa, ukuloba, ukukhwela intaba? Ngebhayisekile nje ezimbini zeebhloko okanye uhambe ukusuka "kwiDean's Retreat" kukho ukufikelela ngokupheleleyo kwi-77-mile yeGreenbrier River Trail ehamba ecaleni koMlambo iGreenbrier.
I-Dean's Retreat ikwakumgama wokuhamba ukuya kwiindawo zokutyela, ezinje, iGreenbrier Grille, apho wena nosapho okanye abahlobo bakho ninokuthimba ukunya ukuze nitye kanye emlanjeni. Kwakhona, kukho ikofu ecocekileyo & nevenkile yebhayisekile, iDirt Bean, kanye ezantsi kwebhloko kuthi.
Injongo yam kukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko. Ndihlala kufutshane kwaye ndiyafumaneka kuyo nayiphi na kwaye zonke iindwendwe ezizifunayo kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Nceda ungalibazisi ukunxibelelana nam malunga nayo nayiphi na imiba / iinkxalabo onokuthi ube nazo!
Eyona ndlela ilungileyo yokunxibelelana nam kukuthumela umyalezo okanye ukufowunela 304-992-4205!
Injongo yam kukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko. Ndihlala kufutshane kwaye ndiyafumaneka kuyo nayiphi na kwaye zonke iindwendwe ezizifunayo kulo lonke ixesha lokuhlala…